Otutu ngalaba na SPF Record gị Martech Zone
Mọnde, Jenụwarị 14, 2013 Fraịdee, June 19, 2015 Douglas Karr
Anyị jikọtara akwụkwọ akụkọ anyị kwa izu (jide n'aka na ị debanye aha!) Achọpụtara m na ọnụego anyị na-emeghe na pịa-dị ala. Ohere inweta bụ na ọtụtụ n'ime ozi ịntanetị ndị ahụ anaghị eme ya na igbe mbata ma ọlị. Otu isi ihe bụ na anyị nwere a SPF ndekọ - ndekọ ederede DNS - nke ahụ egosighi na onye na-eweta ọrụ email ọhụrụ anyị bụ otu n'ime ndị zitere anyị. Ndị na-ahụ maka ịntanetị jiri ndekọ a iji kwado na ngalaba gị na-enye ikike izipu ozi site n'aka onye zitere ha.
Ebe ọ bụ na ngalaba anyị na-eji Google Apps, anyị nwere Google ugbua. Mana ọ dị anyị mkpa itinye ngalaba nke abụọ. Fọdụ folks na-emehie nke itinye ihe ndekọ ọzọ. Nke ahụ abụghị otu o si arụ ọrụ, ị ga-enwerịrị ndị niile nyere ikike izipu ozi na otu ndekọ SPF. Nke a bụ otu esi emelite ndekọ SPF anyị abụọ Ngwa Google na Circupress.
chukwuebuka N'ỌZỌ "v = spf1 a: circupressemail.com a: _spf.google.com ~ niile"
Ọ dị oke mkpa na edepụtara ngalaba niile na-eziga email na nnọchite gị n'ime ndekọ SPF gị, ma ọ bụ na email gị nwere ike ọ gaghị eme igbe mbata. Ọ bụrụ na ịmaghị ma edepụtara onye na-eweta ọrụ email gị na ndekọ SPF gị, mee otu Nyocha SPF site na 250ok:
Buru n'uche na, mgbe ị gbanwere ndekọ TXT gị na ozi SPF, ọ ga-ewe awa ole na ole maka sava ngalaba iji gbasaa mgbanwe ndị ahụ.
Tags: 250okemailozi nnapụta emailotutu ngalaba spfotutu spf ndekọnyocha spfspf ndekọnyocha spf